Uyenza njani into yoTshintsho oluSebenzayo
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza oomatshini ababonakalayo kwiHyper-V ngeWindows, kuya kufuneka wenze iswitshi ebonakalayo ukuze oomatshini bakho babenakho ukunxibelelana nabanye kunye nehlabathi langaphandle. Ukwenza oko, usebenzisa uMlawuli oGuqukayo woTshintsho. Nanga amanyathelo:
KuMphathi weHyper-V, cofa uMlawuli oGuqukayo woTshintsho.
Oku kuvelisa iWindows Virtual Manager window, njengoko kubonisiwe apha.
Ifestile yoMphathi woTshintsho oluSebenzayo.
Khetha uhlobo lweswitshi ofuna ukuyenza.
IHyper-V ikuvumela ukuba wenze iintlobo ezintathu zokutshintsha:
Ngaphandle: Iswitshi ebonakalayo ebopha kwiadaptha yenethiwekhi ebonakalayo, evumela oomatshini ababonakalayo ukuba banxibelelane nabanye, kunye nezinye iikhompyuter kwinethiwekhi yakho ebonakalayo. Oku kuhlala kuluhlobo lweswitshi ekufuneka uyenzile.
Ngaphakathi: Iswitshi ebonakalayo engadibaniyo neadaptha yenethiwekhi ebonakalayo. Olu hlobo lokutshintsha luvumela oomatshini ababonakalayo kule khompyuter ukuba banxibelelane nabanye kunye nakwikhompyuter yomamkeli, kodwa hayi ngezinye iikhompyuter kwinethiwekhi yakho ebonakalayo.
Bucala: Ukutshintsha okubonakalayo okuvumela oomatshini ababonakalayo ukuba banxibelelane nabanye kodwa hayi ngekhompyuter yomamkeli okanye nazo naziphi na iikhompyuter kwinethiwekhi yakho ebonakalayo.
Cofa kwi-Virtual switch.
Useto lotshintsho lwenyani olutsha luyavela, njengoko kubonisiwe apha.
Ukwenza utshintsho olusebenzayo.
Chwetheza igama lotshintsho olwenziweyo kwigama lamagama.
Ungathatha ixesha elingakanani ngokukhuselekileyo i-prednisone
Sebenzisa naliphi na igama olifunayo.
Khetha iadaptha yenethiwekhi ebonakalayo ofuna ukubopha iswitshi kuyo.
Ukuba ikhompyuter yakho ineadaptha yenethiwekhi engaphezulu kwesinye, khetha leyo ufuna ukuyisebenzisa. Ukubopha iswitshi ebonakalayo kwiadaptha yenethiwekhi ebonakalayo kuvumela oomatshini ababonakalayo ukuba banxibelelane kungekuphela kunye kodwa kunye nezinye iikhompyuter ezixhumeke kwiadaptha oyikhethileyo.
Ukuba inethiwekhi yakho inee-VLAN ezininzi, cofa u-Vumela i-Virtual LAN Isazisi ibhokisi yokutshekisha kwaye ufake i-VLAN ID ye-VLAN ofuna ukuba olu tshintshelo ludibane nayo.
Ukuba inethiwekhi ayinayo i-VLAN ezininzi, ungatsiba eli nyathelo.
Ukutshintsha okubonakalayo kuyenziwe. Imeko-bume yakho ye-Hyper-V ngoku inenethiwekhi ebonakalayo endaweni, ukuze uqale ukwenza oomatshini ababonakalayo.
Januwari 100 mg ithebhu
Iinyango zesifo semilenze esingazinzanga
iziphumo ebezingalindelekanga ze-methotrexate ixesha elide
Iziphumo ze-nattokinase zesibindi
Iipilisi eziyi-8 milloxram suboxone